सन्दीप लामिछानेले चार ओभरमा ४६ रन दिएर लिए एक विकेट – Saurahaonline.com
सन्दीप लामिछानेले चार ओभरमा ४६ रन दिएर लिए एक विकेट
सौराहा अनलाइन | २०७५, २५ फाल्गुन शनिबार
काठमाडौं, २५ फागुन । लाहोर क्वालन्दर्सबाट पाकिस्तान सुपरलिग क्रिकेट पीएसएलमा खेलि रहेका लेगस्पिनर सन्दीप लामिछानेले चार ओभर बलिङ गर्दा ४६ रन दिएर १ विकेट लिएका छन् ।
पहिलो ओभरमा १ रन दिएर एक विकेट लिएका सन्दीप व्यक्तिगत दोस्रो ओभरमा ७ रन खर्चन पुगे । तेस्रो ओभरमा सन्दीपले १२ रन दिएका हुन् । सन्दीपले अन्तिम ओभरमा सर्वाधिक २६ रन दिएका थिए ।
आजको खेलमा सन्दीपले टिमको तेस्रो ओभरमै व्यक्तिगत पहिलो ओभर बलिङ गरेका थिए । इस्लामावाद युनाइटेडविरुद्धको पहिलो बलमा कुनै पनि रन दिएनन् । दोस्रो बलमा उनले फिलिप साल्टलाई आउट गर्न सफल भए ।
सन्दीपले फिलिपलाई ह्यारिस सोहेलको हातबाट क्याच आउट गराएका हुन् । तेस्रो र चौथो बलमा कुनै पनि रन नदिएका सन्दीपले पाँचौ बलमा एक रन खर्चिए । छैटौं बलमा लेग बाईको रुपमा इस्लामाबादले ४ रन लिएको थियो । समग्रमा सन्दीपले पहिलो ओभर बलिङ गर्दा १ मात्र रन खर्चिएर १ विकेट लिए । व्यक्तिगत दोस्रो ओभर लिएर सन्दीप टिमको पाँचौ ओभरमा बलिङ गर्न आएका थिए ।
जसमा सन्दीपको पहिलो बलमै वाल्टनले छक्का प्रहार गरेका थिए । दोस्रो बलमा रन बनाउन नसकेका वाल्टनले तेस्रो बलमा एक रन लिएका थिए । चौथो बल डट राखेका सन्दीपले पाँचौ बलमा लेग बाईको रुपमा रन आएको थियो । छैटौं बल पनि वाल्टनले रन बनाउन सकेनन् । सन्दीपले २ ओभर बलिङ गर्दा ८ रन खर्चिएर १ विकेट लिएका थिए । व्यक्तिगत तेस्रो ओभर लिएर सन्दीप टिमको १० औं ओभरमा आएका थिए ।
उनले पहिलो बलमै चौका दिएका थिए । क्यामरन डेलपोर्टले रिभरस्वीप गर्दै चौका प्रहार गरेका थिए । त्यसपछि दोस्रो बलमा एक रन लिँदै स्ट्राइक चेन्ज भएपछि वाल्टनले तेस्रो बलमा रन बनाउन सकेनन् । चौथो रनमा एक रन लिँदै स्ट्राइक परिवर्तन भएपछि डेलपोर्टले पाँचौं बलमा छक्का प्रहार गरेका थिए । अन्तिम बलमा भने कुनै पनि रन बन्न सकेन । समग्रमा तीन ओभर बलिङ गरेका सन्दीपले २० रन खर्चदैं १ विकेट हात पारेका छन् ।
चौथो ओभर लिएर टिमको १६ औं ओभरमा आएका सन्दीपले पहिलो बलमै छक्का दिन पुगेका थिए । आशिफ अलिले छक्का प्रहार गरेका हुन् । दोस्रो बलमा एक रन लिँदै स्ट्राइक परिवर्तन भएपछि डेलपोर्टले तेस्रो र चौथो बलमा लगातार छक्का प्रहार गर्दै शतक बनाएका थिए । पाँचौ बलमा एक रन दिएका सन्दीपले अन्तिम बलमा पनि छक्का खान पुगे । समग्रमा चार ओभर बलिङ गरको सन्दीपले ४६ रन दिएर एक मात्र विकेट हात पारेका छन् ।
हत्या आरोपि वडा अध्यक्ष धरौटीमा छुटेपछि अविरजात्रा २०७७, १२ मंसिर शुक्रबार
मुकेश चौरसिया हत्यामा पूर्वसभासद राजकुमार विरुद्ध मुद्दा नचल्ने २०७७, १२ मंसिर शुक्रबार
गौतमबुद्ध विमानस्थलमा १० मेगावाटको सोलार प्लान्ट राखिने २०७७, १२ मंसिर शुक्रबार
‘ब्लड प्रेसर लो’ छ भने यी खानेकुरा खानुहोस् ! २०७७, १२ मंसिर शुक्रबार
विराटनगरमा कोरोना संक्रमित सुत्केरीको मृत्यु २०७७, १२ मंसिर शुक्रबार
चितवनको पर्यटन विकास गर्न दिगो रोजगारी तालिम परियोजना सुरु (भिडियो) २०७७, १२ मंसिर शुक्रबार
हत्या आरोपि वडा अध्यक्ष धरौटीमा छुटेपछि अविरजात्रा
विराटनगर : छिमेकी हत्याको आरोप लागेपछि डेढ वर्षदेखि फरार रहेका विराटनगर महानगरपालिका–१४ का वडा अध्यक्ष वलदेव.....
मुकेश चौरसिया हत्यामा पूर्वसभासद राजकुमार विरुद्ध मुद्दा नचल्ने
गौतमबुद्ध विमानस्थलमा १० मेगावाटको सोलार प्लान्ट राखिने
‘ब्लड प्रेसर लो’ छ भने यी खानेकुरा खानुहोस् !
चितवनको पर्यटन विकास गर्न दिगो रोजगारी तालिम परियोजना सुरु (भिडियो)
काेराेनाबाट मध्यम उमेरका धेरै संक्रमित
गृह मन्त्रालयले बर्दिबास हत्या काण्ड छानविन गर्ने
१ तोला सुन दिने लाेभमा बलात्कारको घटना जनप्रतिनिधिकै दबाबमा लुकाइयो
प्रधानमन्त्री ओलीको मोदीलाई सन्देश : ‘सीमा समस्या वार्ताबाट समाधान गरौँ’
कीर्ते नागरिकता दिलाउने वडाध्यक्षसहित ५ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी